Koowheel Electric Skateboard Quick Qala Guide - Jomo Technology Co., Ltd
Remote izibani amathiphu :
1.Charge inkomba izoba uma ishaja
2.Battery ukukhanya Direction inkomba ku kusho ixhumeke
3.BLUE kusho ibhethri RED okusezingeni eliphezulu kusho ibhetri iphansi
4.Direction inkomba ujike RED lapho kuhlehlisiwe
1. Faka ibhethri kahle, futhi twist nezikulufi
2.Turn phezu Remote kuqala bese uvule ebhodini ukuxhuma.
3. Push Phambili for ukusheshisa, Donsa Emuva ngoba unyathela amabhuleki.
4. ibhethri izinkomba Skateboard, 4 izibani ku izindlela 100%,
3. Lights izindlela 75%, 2 izibani kusho u-50%, 1 ukukhanya kusho u-20% ngakwesokunxele.
ibhodi yakho Koowheel has a lot of amandla. Landela lezi amathiphu ukuqinisekisa ephephile ogibele isipiliyoni:
Move inkinobho ziyakhula encane.
Gcina sokuma ububanzi ebhodini,
Gcina isikhungo ongaphakeme gravity.
Lean phambili lapho kuyashesha.
Lean emuva uma unyathela amabhuleki.
NJALO Gqoka isigqoko sokuzivikela.
Thola evulekile, indawo ephansi nge ihlanzekile
Gandelwe ride wakho kuqala.
Funda izexwayiso skateboard futhi ekuqaleni leli bhukwana.
OTHER izinto zokuzivikela Kunconywa.
Shaja iBhodi futhi Guqula Ibhethri iphakethe
ofiphele ishaja kuyoba RED uma ishaja, baphendukele GREEN ngemva ligcwaliswe ngokuphelele. Shintsha ibattery uma odile owengeziwe.
Ngaso sonke isikhathi khumbula qinisa ngezikulufo.
Qaphela: Uma ibhethri ibekwe isikhathi eside, kufanele usushajeke, bese agcwaliswa kanye ngenyanga.
1. Hlola isimo amasondo ukuqinisekisa ukuthi uzungeza ngokukhululekile ngaphambi ride ngasinye Hlola amaloli kanye namasondo ukuze uqiniseke ukuthi wonke izingxenye ngokuqinile some.
Musa ukugibela ebhodini uma uzwa noma yimuphi umsindo normal kusuka isondo noma motor amabombo
2. Njalo ukugcina ibhodi yakho ezindaweni ezomile futhi umoya.
Dedani izikhathi manzi ukugwema ukulimala PCB amabhodi nebhethri.
3. Sebenzisa kuphela Koowheel Ishaja. Amanye amashaja uncertified kungabangela izinkinga zokuphepha.
Ibhethri okufanele njalo ezindaweni lapho izinga lokushisa ngaphansi 60Celsius degrees.
Shaja ibhethri njalo ezinyangeni 2-3 lapho kwesokunxele ubuningi isikhathi eside ukuze ugweme umonakalo ohlala njalo.
ukushaja ibhethri ngokugcwele ngenxa ekusetshenzisweni kokuqala.
Gcina imvelo ukushaja omile futhi ahlanzekile, qiniseka echwebeni ukushaja esomile ngaphambi icala ngalinye.
Ungalokothi ushiye ibhodi zingagadiwe ngenkathi ishaja
1. Sebenzisa kuphela ezingxenyeni yasekuqaleni ebhodini ukuze sigweme izinkinga zokuphepha.
2. Jwayela nemibandela kwabhoboka futhi uqinisekise nge ephelele braking ukusebenza.
3. Amafutha le amabombo njalo
4. Beginners kufanele ukugibela ebhodini ngokuqapha e esibushelelezi komzila womgwaqo.
5. Gwema umgwaqo elina phezu-esingemnandi.
Electric skateboard * 1 Ibhethri * 1
Umsebenzisi ibhukwana * 1 Ishaja * 1
SIQINISEKISO ESINOMKHAWUKO :
Koowheel ibhodi imbozwe yesiqinisekiso eyodwa nomkhiqizi nyaka e-USA, yesiqinisekiso iminyaka emibili kwabakhiqizi eYurophu ukuthi ihlanganisa yokulimala bewumsebenzi nezezinto ezibonakalayo. Lokhu akuhlanganisi umonakalo obangelwa ukuhlukunyezwa, kabi, ukunganaki, ingozi, noma ogibele emanzini. Ibhethri Isiqinisekiso izinyanga eziyisithupha.
FOR RETURN futhi iwaranti BONKE ukuthumela :
Sicela ugcine ibhokisi lakho lokuthumela. Iwaranti akubandakanyi umonakalo kusuka lokuthumela emaphaketheni enganele.
AMATHUBA OMUNTU EKUFENI NOMA UKULIMALA EZINKULU
Noma nini lapho wenza ukugibela ebhodini Koowheel, wena engozini yokufa noma yokulimala kabi kusukela ukulahlekelwa ukulawula, ukushayisana, nokuwa. Ukugibela ngokuphepha, kumelwe ufunde bese ulandela yonke izixwayiso kanye nemiyalelo kuleli bhukwana.
Njalo isigqoko sokuzivikela uma ugibele. Gwema amanzi, ezindaweni ezimanzi, ezishelelayo / evele engalingani, akhuphuke imimmango, traffic uqhekeke, amathrekhi, amatshe, amadwala, noma iziphi izithiyo ezingasenza ukulahlekelwa traction futhi abangele ukuwa. Gwema ebusuku ogibele, ezindaweni yenkungu, nezikhala ezincane.
ISEXWAYISO: Musa ukugibela Koowheel ibhodi ezindaweni, ku ingakwesokunene, noma ngesivinini lapho ubungeke ngokuphepha ukulawula i longboard unpowered. Esimeni interferenceor engenantambo ibhethri iphutha, kungase kudingeke ukuba sincike ngezicathulo izindlela ezifana footbraking noma ngokuhambisa ukuyeka.
ISEXWAYISO: GWEMA AMANZI!
Ibhodi yakho Koowheel akuyona amanzi ubufakazi. Tronics Elec-, amabombo, kanye nezinye izingxenye kungalimala. Umonakalo Water engamboziwe ngaphansi sewaranti.
ISEXWAYISO: Ncinza AMAPHUZU!
Gcina iminwe, izinwele, futhi izingubo kude amabhande, izinjini, amasondo, futhi zonke izingxenye ezinyakazayo
ISEXWAYISO: INGOZI yokuthi umuntu abanjwe ugesi!
Ungavuli noma ukuphazamisa electronics housings, nakho voids ukuthi isiqinisekiso singasebenzi.
BAKHO KOOWHEEL: Sicela ukugibela ngendlela efanele futhi sihlonipha labo abaseduze nawe, kokubili ukuphepha kwakho ukusiza ukugqugquzela ezemidlalo yethu entsha yezokuthutha.